Lamaanihii guurkooda naf loo gubay oo xabsi guri ku ah Muqdisho
Cabdiraxmaan oo kasoo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa si qiiro leh wuxuu ku dalbanayaan "gurmad balaaran oo aan loo kala harin".
"Markii uu Injineer Yariisow dhintay illaa iyo hadda wax daryeel ah ma haysano. Meel cidlo ah ayaan taaganahay," ayuu Cabdiraxmaan yiri isagoo cod dabacsan ku hadlaya.
Wuxuu raaciyey: "Hadii aan shaqeysan lahaayina, qof xorriyad haysto ayaa shaqeysto, qofaan xorriyad haysana ma shaqeysano karo".
Inkasta oo Cabdiraxmaan iyo Ruqiya ay qadar haysto, haddana kama niyad-jebin in uu taageero ka heli doonaan bulshadda Soomaaliyeed. "Waxaan ka rajeynayaa in ay na garab qabtaan oo bini'aadanimo noola fiiriyo".
Cabdiraxmaan oo ka walwalsan in la beegsado ama la dilo hadii ay dibada u baxaan ayaa codsaday in la adkaayo ammaankooda si aysan waxyeelo u soo gaarin.
"Gudoomiyaha cusub ee gobolkana waxaan isana ka codsaneynaa in uu garab nasiiyo oo Soomaalinimo wax noogu qabto," ayuu cod dareen leh ku yiri. "Booskii Injineer Yariisow in uu noo buuxiyo," ayuu ku daray.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa bishii April ee sanadkan 2019 waxay saddex ruux - haweenay iyo rag - dil toogasho ugu xukuntay fal-dambiyeedka lagula kacay Axmed Dowlo, wallow qoyska dhibanaha ay saluugeen.
Xisbiyo iyo Madal ka dhisan Muqdisho ayaa uga digay Madaxda qaranka in dalka geliyaan...
Aqalka Sarre oo cambaareeyay wariyeyaal lagu xiray Muqdisho
Soomaliya 27.10.2019. 14:02
Wasiirkii Arrimaha Gargaarka Soomaaliya oo is-casishay
Soomaliya 15.11.2017. 13:35